Abakhiqizi nabahlinzeki be-Semi-Blackout - I-China Semi-Blackout Factory
Intengo Eshibhile Idube Lipofusha Indwangu Enombala Ongenalutho
I-Zebra Blinds Fabric
Indwangu yama-Zebra blinds yaziwa nangokuthi indwangu eyi-sheer blinds, indwangu eyi-rainbow blinds, indwangu yama-roller blinds, kanye nendwangu eyi-double-layer blinds noma indwangu eyi-dual roller blinds, eyasungulwa eSouth Korea futhi idume kakhulu emhlabeni jikelele. Kuwuhlobo lwendwangu aluhlanganisi kuphela izinzuzo zendwangu kanye ne-mesh, kodwa futhi luhlanganisa imisebenzi yama-venetian blinds, ama-roller blinds nama-Roman blinds.Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, ezindlini zama-villas, izakhiwo zehhovisi ezisezingeni eliphezulu nezinye. izindawo.
Uma kuqhathaniswa nendwangu eminingi ye-zebra blinds emakethe, ukubukeka kwendwangu ye-Groeve zebra blinds kungcono kakhulu, futhi ukusebenza kulula kakhulu.
I-China Decor Privacy Zebra Blind Fabric For Office Window Screen
Indwangu Eyimpumputhe yeZebra
Ama-Zebra blinds, aziwa nangokuthi ama-rainbow blinds, ama-dimming blinds, ama-roller blinds, ama-day and night blinds, njll., adabuka e-South Korea futhi adume kakhulu emhlabeni jikelele. Ububanzi bendwangu ye-zebra roller blinds yi-3m, futhi impahla iyi-polyester engu-100%.
3. Sebenzisa indwangu ethambile noma isipontshi esiswakanyiswe ngamanzi afudumele ukuze usule amakhethini ngesikhathi sokukhipha uthuli / ukuvala inzalo. Uma kunesidingo, izinto zokuhlanza ezithambile zingengezwa. Sula ngobumnene ukuvimbela ukushwabana noma ukulimaza indwangu. Ukusula kungenza ikhethini lihlanzeke.
4. Sebenzisa insimbi yesitimu ukufutha endaweni engaba ngu-10 cm kude nekhethini lendwangu, okungaba nomthelela wokukhipha uthuli / inzalo.
I-China Factory Supply Zebra Blinds Fabric With Competitive Price
Indwangu ye-Zebra blinds yaziwa nangokuthi indwangu eyi-sheer blinds, indwangu yama-rainbow blinds, indwangu ye-dimming roller blinds, nendwangu eyimpumputhe ye-double-layer noma indwangu yama-roller blinds. Kuwuhlobo lwendwangu elukiwe kusukela entweni encane enobubanzi obufanayo kanye nemeshi ehlukaniswe ngokwehlukana.
Uma kuqhathaniswa nendwangu eminingi ye-zebra blinds emakethe, ukukhanya okulungiswayo kuyinzuzo enkulu ye-Groeve Zebra Blinds Fabric, engakwazi ukuhlangabezana nezidingo zezimo ezihlukahlukene zokukhanya, ngesikhathi esifanayo, ukubukeka nakho kuhle, futhi ukusebenza kulula.
Imini Nobusuku Izingqimba Ezimbili I-Sheer Shades Indwangu Yasekhaya
Indwangu ye-Sheer Shades
Ama-Sheer shades, aziwa nangokuthi ama-zebra blinds, ama-dimming blinds, ama-roller blinds aphindwe kabili, amakhethini emini nasebusuku, ama-rainbow blinds, njll., adabuka e-South Korea futhi adume kakhulu emhlabeni jikelele. Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, kuma-villas, ezakhiweni zamahhovisi ezisezingeni eliphezulu nakwezinye izindawo.
Indwangu yesitayela saseYurophu ethi Rainbow Blinds 100% Polyester
Indwangu ye-Rainbow Blinds
Ama-rainbow blinds, aziwa nangokuthi ama-zebra blinds, ama-dimming blinds, ama-roller blinds anengqimba ephindwe kabili, ama-blind blinds emini nasebusuku, njll., adabuka e-South Korea futhi adume kakhulu emhlabeni jikelele.
Njengoba sonke sazi, umphumela we-shading wendwangu ye-rainbow blinds unqunywa ngokuyinhloko yizinto ezibonakalayo. Ngokwezici zendwangu, ingahlukaniswa ngendwangu eyimpumputhe ye-rainbow eyi-semi-blackout kanye ne-blackout rainbow blinds indwangu.
Ukukhethwa komphumela we-shading kunqunywa ngokuyinhloko ngokwendawo esetshenzisiwe. Kungakhathaliseki ukuthi yiluphi uhlobo oludingayo, singakunikeza isiphakamiso esingcono kakhulu namasampuli.
I-Factory Hot Thengisa Indwangu Eyizimpumputhe Ye-Sheer Roller Yehhovisi
Indwangu ye-Sheer Roller Blinds
Ama-sheer roller blinds, aziwa nangokuthi ama-zebra blinds, ama-dimming blinds, ama-roller blinds anengqimba ephindwe kabili, amakhethini emini nasebusuku, ama-rainbow blinds njll., adabuka eSouth Korea futhi adume kakhulu emhlabeni jikelele. Indwangu ye-sheer roller blinds yi-polyester engu-100%.
Ayikwazi ukufeza umphumela we-shading kuphela, kodwa futhi ihlangabezane nezidingo zokukhanyisa lapho abantu besebenza. Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, ezindlini zama-villas, ezakhiweni zamahhovisi ezisezingeni eliphezulu nakwezinye izindawo.Sinezinto ezingaphezu kuka-200 encwajaneni yethu yesampula yendwangu ye-sheer roller blinds, ungathola imibala yakho efanelekile kuyo.
Indwangu Yekhwalithi Ephezulu Yezimpumputhe Emini Nobusuku 100% Polyester
Indwangu Eyimpumputhe Yemini Nobusuku
Indwangu eyimpumputhe emini nasebusuku yaziwa nangokuthi indwangu yamadube blinds, indwangu eyimpumputhe, indwangu yobumpumputhe bothingo, indwangu ye-dimming roller blinds, kanye nendwangu eyimpumputhe ye-double-layer noma indwangu yama-roller blinds.
Izimpumputhe zemini nobusuku ziyi-double-layer blinds. Ukufiphala kwayo kufinyelelwa ngokuphambanisa ungqimba lwendwangu kanye nesendlalelo semeshi. Lapho izingqimba zemeshi zidlulana, ukukhanya kuba thambile futhi ukukhanya okuqondile kuyehla ngokwezinga elithile. Lapho izingqimba zendwangu zidlulana, ukukhanya kuvinjwe ngokuphelele, ukuze ekugcineni kuvimbe ukukhanya. Yonke imini nobusuku indwangu eyimpumputhe yenziwe nge-polyester engu-100%, futhi sinezitifiketi zazo zonke izindwangu.
Izinga Lokusetshenziswa Okuphezulu Kwendwangu Yomthunzi Wedube 100% I-Polyester
Indwangu yeZebra Shade
Indwangu ye-Zebra Shade yaziwa nangokuthi indwangu eyi-sheer blinds, indwangu yamakhethini e-rainbow, indwangu ye-dimming roller blinds, nendwangu eyimpumputhe ye-double-layer noma indwangu yama-roller blinds. Ngokwezici zendwangu, ingahlukaniswa ngendwangu ye-zebra emnyama kanye nendwangu ye-zebra emnyama.
Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, kuma-villas, ezakhiweni zamahhovisi ezisezingeni eliphezulu nakwezinye izindawo. Endaweni evulekile njengegumbi lokuphumula kanye negumbi lokufunda, uma izidingo ze-shading zingekho phezulu, ungakhetha ama-zebra blinds angama-semi-blackout. Uma kuyikamelo lokulala noma igumbi elilalelwayo elibukwayo elidinga ukuthungwa okuphezulu, ungakhetha amakhethini amadube amnyama.
Inomuzwa onamandla wezinhlangothi ezintathu futhi ifudumele kakhulu. Lapho izimpumputhe zivuliwe, ungabheka indawo yangaphandle futhi ukukhanya okungena ekamelweni kuthambile futhi kukhululekile.
Lapho ikhethini livaliwe, lihlukaniswe ngokuphelele ngaphandle, liqinisekisa ubumfihlo futhi libonisa ukulula nobuhle bezimpumputhe ze-rainbow.
Indwangu yethu ye-rainbow blinds iyisinqumo esingcono kakhulu samafekthri ama-rainbow blinds noma abathengisi bezitolo. Singanikela ngamasampula wamahhala wendwangu yama-rainbow blinds kumakhasimende ethu. Futhi umqulu ngamunye wendwangu ye-rainbow blinds kufanele uphumelele ukuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa.
Indwangu Yedube Enemibala Eningi engu-100% I-Polyester YamaVillas
Indwangu ye-Zebra yaziwa nangokuthi indwangu eyimpumputhe, indwangu ye-rainbow blinds, indwangu ye-dimming roller blind, nendwangu eyimpumputhe ye-double-layer noma indwangu yama-roller blinds. Ngokwezici zendwangu, ingahlukaniswa ngendwangu ye-zebra emnyama kanye nendwangu ye-zebra emnyama.
Endaweni evulekile njengegumbi lokuphumula kanye negumbi lokufunda, uma izidingo ze-shading zingekho phezulu, ungakhetha ama-zebra blinds angama-semi-blackout. Ayikwazi ukufeza umphumela we-shading kuphela, kodwa futhi ihlangabezane nezidingo zokukhanyisa lapho abantu besebenza. Uma kuyikamelo lokulala noma igumbi elilalelwayo elibukwayo elidinga ukuthungwa okuphezulu, ungakhetha amakhethini amadube amnyama. Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi okhetha ukuyikhetha, singakunikeza isiphakamiso esingcono kakhulu namasampuli.
Isitayela esisha se-Rainbow Blinds Fabric Semi-Blackout
Ama-rainbow blinds, aziwa nangokuthi ama-zebra blinds, ama-dimming blinds, ama-roller blinds anengqimba ephindwe kabili, ama-blind blinds emini nasebusuku, njll., adabuka e-South Korea futhi adume kakhulu emhlabeni jikelele. Kuwuhlobo lwendwangu elukiwe kusukela entweni encane enobubanzi obufanayo kanye nemeshi ehlukaniswe ngokwehlukana. Inomuzwa onamandla wezinhlangothi ezintathu futhi ifudumele kakhulu. Indwangu ye-rainbow blinds yi-polyester engu-100%.
Uma kuqhathaniswa nendwangu eminingi yezimpumputhe ze-rainbow emakethe, ukukhanya okulungiswayo kuyinzuzo enkulu ye-Groeve Zebra Blinds Fabric, engakwazi ukuhlangabezana nezidingo zezimo ezihlukahlukene zokukhanya, ngesikhathi esifanayo, ukubukeka nakho kuhle, futhi ukusebenza kulula.
Isiqinisekiso Sekhwalithi Esiqinile Indwangu Yedube engu-100% I-Polyester Semi-Blackout
Indwangu ye-Zebra blinds yaziwa nangokuthi indwangu eyi-sheer blinds, indwangu yama-rainbow blinds, indwangu ye-dimming roller blinds, nendwangu eyimpumputhe ye-double-layer noma indwangu yama-roller blinds. Ngokwezici zendwangu, ingahlukaniswa ngendwangu ye-zebra emnyama kanye nendwangu ye-zebra emnyama.
Ayihlanganisi kuphela izinzuzo zendwangu kanye ne-mesh, kodwa futhi ihlanganisa imisebenzi yezimpumputhe ze-venetian, izimpumputhe ze-roller kanye nezimpumputhe zamaRoma. Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, kuma-villas, ezakhiweni zamahhovisi ezisezingeni eliphezulu nakwezinye izindawo.